"म सधै खुसी हुन्छु, थाहा छ किन ? किनभने म कसैबाट केही अपेक्षा राख्दिन; आशाले सधै निराश बनाउदछ । जीवन छोटो छ, यसर्थ खुलेर जीऔं ।...
"म सधै खुसी हुन्छु, थाहा छ किन ? किनभने म कसैबाट केही अपेक्षा राख्दिन; आशाले सधै निराश बनाउदछ । जीवन छोटो छ, यसर्थ खुलेर जीऔं । खुसी रहौं । मुस्काइरहौं । र, यी कुराहरू सधै याद राखौं : बोल्नुपूर्व - सुन । लेख्नुपूर्व - सोच । खर्च गर्नुपूर्व - कमाउ । प्राथानापूर्व - क्षमा गर । चोट पुर्याउनुपूर्व - अनुभूत गर । घृणा गर्नुपूर्व - माया गर । हार्नुपूर्व - प्रयाश गर । मर्नुपूर्व - खुलेर बाँच । यँही जीवन हो, यसलाई अनुभूत गर अनी आनन्द मनाऔं ।"